Fomba fiasa - Blean Strategie
Ny antoka omenay ny mpanjifa
Fomba fiasa mavitrika sy vaovao oenti-manohana, sy fiofanana natao indrindra hoan’ny orinasa madinika sy salantsalany izay tena maniry hanao ny dingana voalohany miaraka amin’ny ekipany, ho amin’ny fiovàna kolontsaina LEAN na eo amin’ny sehatra stratejika izany na asa mivantana.
Tsotra, mahomby ary voasedra, ny fomba fiasanay dia hampisy fiantraikany tsara, amin’ny fandraisan’ny ekipa anjara mankany amin’ny tanjona izay misy dikany.
Fiaraha-mizotran’ny ekipa tsikelikely mankamin’ny fiovana kolontsaina marina :
Ny rehetra dia miara-mitodika mankany amin’ny paikadin’ny orinasa.
Ny fifohazan’ny ekipa sy ny fahatongavany saina amin’ny zavadehibe atrehina, ny tanjona sy ny fivoaran’io ekipany io andavanandro.
Ekipa tonga saina ny amin’ny fiavian’ny fandaniam-poana, sy ny azony atao mba handray an-tanana ny famakafakàna, ny fikarohana sy fametrahana vahaolana tsotra, mahomby ary maharitra.
Ny fahasalamàna-fiarovana any am-piasàna dia lasa laharam-pahamehana ho an’ny rehetra ary atrehana isan’andro amin’ny fomba stratejika.
Serasera fifandraisana mivoatra sy mahomby amin’ny andavanandro.
Rivotra iainana ao am-piasàna miova, ary tsikelikely dia hiova ny fanao « Tadiavina ny olo-meloka » lasa « Miaraka mamaha ny olan’ny fandaniam-poana araka ny lojika isika ».
Fahaleovantena sy fampandraisaana andraikitra ny mambra tsirairay ao anaty ekipa mitombo avy folo heny.
Vetivety, dia hahatsapa ilay na ireo mpitondra, fa tsy irery izy ireo ary mitondra ny mavesatra rehetra eo an-tsorony. Mazava ho azy, mihavao ny fahatokisan’izy ireo ny ekipany ary hazoto hizara asa kokoa izy ireo, ka ho afaka hifofotra amin’ny asa stratejika kokoa.
Fahombiazana azo avy hatrany, 20 hatramin’ny 30%.
Fiantraikany mafonja amin’ny endrika matihanin’ny orinasao.
Fahadiovana sy filaminana any amin’ny sampana rehetra
Fihenana azo tsapain-tanana eo amin’ny fahadisoana sy ny famerenan’asa.
Fahatsapanao fahatokisana eo ho eo rehefa mampahafantatra sy mitondra mpitsidika ny orinasanao ianao, na ireo mpanjifa ankehitriny na ho avy, na ihany koa ireo mpamatsy entana sy mpiara-miasa amin’ny afera.
Hafaliana sy rehareha ho anao ny mampahafantatra ny orinasanao any amin’ny tranonkala, any amin’ny tambajotra sosialy sy any amin’ireo antontan-taratasin’ny orinasanao.
Hisy fotoana matetika, manolotra ny ekipan’ny orinasao fampiofanana fanatsaràna zava-bita sy fanaraha-maso fahatomombanana izahay, mba ho lasa tena mandeha ho azy ny kolontsaina LEAN.